Ny mahavoa ny metisy
2010-10-17 @ 22:53 in Andavanandro
Ireo mpamaky ahy hatramin'ny ela dia efa mahafantatra tsara ny fomba fanoratro. Angamba tsy dia mivaona amin'izay ity ataoko etoana ity. Gaga ihany ny tena raha nahita fa feno setroka sy mafana ratsy izany ny teto andrenivohitra omaly alahady. Tsy nahare vaovao loatra moa ny tena sady tsy niserasera, no tsy manaraka haino aman-jery rahateo fa hay nisy nandoro ny ala tokana any amin'ny Itasy antsoina hoe Ambatofolaka, araka ny nolazain'ny namana iray tao amin'ny twitter, sady mpiara-mandika lahatsoratra ao amin'ny GlobalVoicesOnline.org teny malagasy ihany koa moa. Raha ny vanim-potoana dia fanaovan'ny olona ny doro-tanety tokoa izao ary dia ataony ihany koa ny doro-ala. Saingy tena mampalahelo sy mahonena kosa ny toe-tsaina amin'ny fandoroana ny tanety sy ny ala ka mahatonga ny eritreritra indraindray adala ka manao anankampo hoe maninona raha ajedaka any ny olona tratra manao tsinontsinona ny firenena sy ny ho avin'ny taranaka tahaka izao?
Mitovitovy amin'izany ihany izay tantaraiko etoana. Nisy nandoro ny fako tao anaty daba fanariana azy, ka nitady hahatratra ny fefy voajanahary na fefy kipreso ana villa ipetrahana vazaha tale-na banky iray eto Antananarivo ny Asabotsy atoandro teo tamin'iny manodidina an'Ankatso iny. Nanao hazolava (nitady fanampiana) tamin'ny mpiara-monina manodidina io vazaha io hamono ilay afo. Tonga tokoa ny fokonolona satria mety ho tratran'ny afo rahateo ny tranon-dry zareo akaiky io afo tamina fanariam-pako io. Vao nahita ny firodorodon'ny olona anefa ramatoa metisy vazaha-malagasy (izay handraisanareo azy fa metisy gasy izy izany aloha!) vadin'ilay vazaha tale-na banky dia nandroandroaka ny olona sady nanompa izay averiko eto angamba satria tsy mampaninona loatra antsika mpamaky rehefa amin'ny teny frantsay ilay ompa: "Allez cochons! Couillons! Vous, les Malgaches, ne savez que voler!" Hatezerana ny an'ny olona ka dia lasa avokoa, samy niaro ny tranony tsy ho azon'ny afo sisa. Izany hoe rehefa amina toe-javatra sasany, toy ny hirotsaka hofidiana filoham-pirenena na solombavam-bahoaka ohatra, dia mihazakazaka ny ho Malagasy ny Metisy SASANY fa any no misy ny tombontsoa fa amin'ny toe-javatra hafa kosa indray dia manava-tena ho tsy Malagasy ny Metisy SASANY. Manahirana izany rehefa tsy Malagasy manontolo ilay olona amin'ny toe-javatra sarotsarotra ka mahasahy manompa ny Malagasy, izay tsy sahin'ny tena vahiny natao loatra.
Tonga ny Mpamonjy voina izay nanao sarimihetsika ihany koa. Fiara roa no hitan'ny fiarahamonina tonga fa mody najanona tery ambany lavidavitra tery ilay fiarabe mahazaka rano betsaka kokoa fa fiara somary kely kokoa no tonga teo an-toerana. Ireo mpamonjy voina "Sapeurs-pompiers" ireo ihany no afa-niditra tao amin'ny faritr'ilay villa izay efa may ny tranon'ny mpiambina ny tanàna fa efa niredaka tamin'ny hazo kypreso moa ny afo. Lany vetivety ny rano nentin'ny fiarabe voalohany dia mody niantso ny lehiben'ireo mpamonjy voina tonga tao an-toerana. Nampaneno anjombona amin'izay ilay fiarabe najanona tery lavidavitra somary takona tery ka nitabataba ery ry zalahy hoe iny fa tonga ny renfort, te-hiseho amin'ny tompon-trano izany ry zalahy fa tena manao ny asany sady vetivety amin'ny zavatra atao.
Maty ihany ny afo nony ela ny ela, lasa ny mpamonjy voina vao gaga ry tompontrano fa nisy entana sarobidy maromaro no nanjavona tao an-tranony izay tsy tena voakasiky ny afo loatra ankoatra ny manoloana ny trano sy ny lavarangana. Tsy nisy fokonolona tafiditra aloha tany fa ny mpamonjy voina sy ny tompontrano ihany no afaka nivezivezy tao. Dia lasa amin'izay ny eritreritra hoe efa fikasana mialoha ve ny hangalarana tao an-trano ka mody nandoroana fako teo akaiky teo hanasaritaka ny fifantohana amin'izay mpangalatra mety ho efa tafiditra tao an-trano; sa tamin'ireo mpamonjy voina no misy fainga-tanana satria raha efitra betsaka kokoa no may dia heverina hoe may koa ny zavatr'olona tsy hita? Dia ahoana moa izany fa marina ihany ny tenin'ilay vehivavy metisy malagasy mandà ny maha-malagasy ny tenany niteny hoe : "Allez cochons! Couillons! Vous, les Malgaches, ne savez que voler!". Tsy io kosa aloha ny nataoko ho lohateniny fa mba famelezana ny metisy no nataoko...
Jentilisa, alatsinainy 18 oktobra 2010